दशैंबीच फेरी ह्वात्तै बढ्यो प्याजको भाउ : हेर्नुहोस् केजीको कति छ ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दशैंबीच फेरी ह्वात्तै बढ्यो प्याजको भाउ : हेर्नुहोस् केजीको कति छ ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुकेको प्याजको मूल्य बढेको छ । बडा दशैं शुरु भए लगत्तै नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य बढेको हो । बजारमा प्याजको मूल्य सोमबारको तुलनामा आज बढेको छ । प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँले बढेको हो ।
कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा मंगलबार प्याजको थोक मूल्य अधिकतम १ सय ३५ रुपैयाँ र न्यूनतम १ सय ३० रुपैयाँ तोकिएको छ भने औसत मूल्य १ सय ३२ रुपैयाँ तोकिएको छ ।प्याजको मूल्य यसअघि सोमबार किलोको एक सय १८ रुपैया रहेको थियो । चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा प्याजको मूल्य बढ्दै गइरहेको हो ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
अर्को समाचार, जानी राखौं ! पारिजात फूलको फाइदापारिजातको फूल सुन्दरता र सजावटमा मात्र होइन, स्वास्थ्यका लागि समेत लाभदायी सिद्ध भएको छ ।अंग्रेजीमा नाइट जस्मिन् भनिने पारिजात फूलका विभिन्न फाइदाहरु रहेका छन् । यहाँ हामीले केही फाइदाहरु उल्लेख गरेका छौं ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
– पारिजात फूलको विशेष महत्व छ । यसले मुख्य गरी तपाईंको जीवनमा तनाव हटाउन मद्धत गर्दछ । यतिमात्र होइन त्यसको वास्नाले नै मनमा खुशी पैदा गराउँछ । साथ साथै सुगन्धले मस्तिष्कलाई शान्त पार्छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
– पारिजातको फूल राति मात्र फुल्दछ । विहान हुनासाथ जमिनमा खस्न थाल्छ । यो पनि मानिन्छ कि, पारिजातको वृक्षलाई छोए मात्र पनि थकाई मेटिन्छ ।– पुराणमा उल्लेख भए अनुसार, पारिजातको वृक्ष तथा फूलले शान्ति तथा समृद्धि ल्याउने कुराको वर्णन गरिएको छ । तर पारिजातको वृक्ष उक्त व्यक्तिको घरमा भएमात्र त्यो सम्भव हुने विश्वास गरिन्छ ।
– आयुर्वेद अनुसन्धान अनुसार १५ देखि २० वटा पारिजातको फूलको रस बनाएर पिएमा हृदय रोगहरु निको हुने बताइन्छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******